ဆာပိုလို . အိုတာရု ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan(1/1)
ဆာပိုးရိုးသည် ဟိုကိုင်းဒိုး၏အကြီးမားဆုံးမြို့ ဖြစ်ပါသည်။ (ဆာပိုးရိုးနှင်းပွဲ) သည် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ များစွာသော ခရီးသွားများလည်း စုစည်းလာရောက်ကြပါသည်။ ဆာပိုးရိုးခေါက်ဆွဲ၊ ဟင်းရည်ကာရေး၊ ဂျုးဂိစကန်၊ စုအိစွတ် စသော များစွာသောအရာများကိုလည်း ခံစားနိုင်ပါသည်။ အိုတရုသည် ပင်လယ်ရေလက်ကြားတစ်လျှောက်တွင် တန်းစီရှိနေသော အိမ်လေးများ၊ အဆောက်အဦးများသည် သမိုင်းကြောင်းကို ခံစားရစေပါသည်။ ဖန်၊ ဆူရှိများလည်း ထင်ရှားပါသည်။
ဆာပိုလို . အိုတာရု၏လူကြိုက်များနေရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်လစဉ်ကြည့်ရှုမှုနှုန်းဖြင့်စီသည်
ပင်လယ်ကမ်းနားတစ်လျှောက်ကို မြေဖို့ ကာ ၁၉၂၃ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးအောင်တည်ဆောက်ခဲ့သော အရှည် ၁၁၄၀ မီတာရှိသော တူးမြောင်း။ တစ်ဖြောင့်တည်းမဟုတ်ဘဲ ပ...
၁၉၇၂ ခုနှစ် ဆာပိုလို အိုလံပစ်မှာ နှင်းလျှောစီးကစားကွင်းဖြစ်လာတဲ့ ကစားကွင်းဖြစ်တယ်။ တောင်ထိပ်ထိ ဓါတ်လှေကားဖြင့် တတ်နိုင်ပေမယ့် စီးတဲ့အချိန...
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ရေတွက်လို့ ရနိုင်သော နာနောဟနပန်းဧရိယာလွင်ပြင်ကြီးသည် ဂုဏ်ယူရလောက်သည့်ပန်းခင်း။ (ဟိုကိုင်းဒိုးကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသောတခဏ ၁၀၀ )တ...
အမျိုးအစား ၉၂ မျိုး၊ ပျမ်းမျှ အပင်ပေါင်း ၄၇၀၀ခန့် ပေါက်ရောက်နေသော ပန်းခြံ။ ရုံးများတည်ရှိသောလမ်း၏အလယ်တွင်ရှိသောကြောင့် မျက်မှောက်ခေတ်အဆော...
မဲဂျိခေတ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော အိုတရုအိုရုဂေါဒိုးဖြစ်ပါသည်။ ပင်မဆောင်နှင့် အဆောင်နှစ်ခုရှိပြီး အုပ်ကြွပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဆောင်းအဦး၏အ...
အဲရိမိုမြို့မှာရှိတဲ့ တိုယောနိရေကန်က ဟိဒါခါ စမ်းမြခုအဲရိမိုအမျိုးသားဥယျာဉ်ထဲမှာ တစ်ခုတည်းသော သဘာဝရောကန်ဖြစ်တယ်။ တောရိုင်းသစ်တောတွေ ဝန်းရံ...
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းတွင် အိုဒိုးရီပန်းခြံကို အစထားပြီး ပွဲကျင်းပရာနေရာများစွာတွင်ပြုလုပ်ကြပါသည်။ နှင်း နှင့် ရေခဲပွဲတေ...
လမ်းတဖြောင့်တည်းဖြစ်ပြီး ၇ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားတဲ့ ဆာကူရာပင် ၃၀၀၀ လောက် ပွင့်နေကြပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်းအတာက ဂျပန်အကောင်းဆုံးလို့ ပြောကြပြီး ( ဆ...
( ငယ်ရွယ်တုန်း ရည်မှန်းချက်ထားပါ ) ဆိုတဲ့ စာကြောင်းဖြင့် သိခဲ့တဲ့ ခုရခုပညာရှင်က ဖွင့်ထားတဲ့ ( ဆာပိုလိုစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ ) က ဒီကျောင်းကေ...
အဝေးပြေးလမ်းမှ ရာအုစုရေကန်ထိ တောလမ်းခရီးစဉ်ရဲ့ လမ်းတဝက်မှာ ရှိတဲ့ နွံရေကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ စမ်းနိုနုမရဲ့ ထိပ်မှာ ရာအုစုတောင်ထိပ် တည်ရှိပြီး ...